Ity no WhatsApp Status, ny zavatra manaraka ao amin'ny app chat | Vaovao momba ny gadget
Toy izao no fiasan'ny WhatsApp Status
Manuel Ramirez | | General, About us, WhatsApp
Omaly dia afaka nanome ny mpampiasa Android nony farany farany nahavita ny dianay ho an'ny fanavaozam-baovao marobe amin'ny WhatsApp mifandraika amin'ny fanohanana ireo sarimiaina GIF. Toa niniana natao ireo tovolahy tao amin'ny WhatsApp mba haharitra 4 volana hampidirana ny endri-javatra izay nalain'ny Telegram hatao amin'ny fanavaozana.
Mila mampiasa ny kinova beta farany an'ny WhatsApp hampavitrika ny fikarohana GIF sarimiaina, misy ny mpampiasa sasany izay nahagaga ny tenany ampidino ny Status WhatsApp, iray amin'ireo endri-javatra andrasana indrindra ho an'ny fampiharana chat napetraka indrindra eto ambonin'ny planeta ary hainay ihany ny fomba fiasan'izy io.
Tamin'ny voalohany dia nisy ny resaka fa ny WhatsApp Status no fivoaran'ny hafatra fampielezana, saingy toa a fanavaozana ny satan'ny WhatsApp. Eny, io lahatsoratra io izay ahafahantsika mampahafantatra ny hafa ny fomba ahitantsika ny tenantsika na ny toerana nametrahantsika an'io andianteny mahay momba ny fiainana io.
Raha vantany vao mavitrika ny WhatsApp Status, araka ny asehon'ny sary ary izany dia avy amin'ny fanavaozana ny mpizara, dia ho hitanao fa ny efijery lehibe, izay niantsoanao ny antso, ny fifampiresahana ary ny fifandraisana. novaina mba hanana kiheba telo. Ny iray amin'izy ireo dia ho an'ny chat, ny iray hafa ho an'ny 'status' na ny status, ary ny farany ho an'ny antso; na ankehitriny aza dia misy bokotra iray ho an'ny fakantsary, izay milaza fa afaka maka sary haingana isika hampitana izany amin'ny Status.
Efa ao amin'ny tabilao WhatsApp Status, afaka mametraka sary isika, na dia mety ho karazana atiny hafa toy ny GIF aza izy io, miaraka amina sary hiseho mandritra ny 10 segondra. Amin'ny ora 24 dia voafafa ho azy izy io ary tonga ara-dalàna hanoloana ny soratra satana.
Na izany na tsy izany, ny kinova farany amin'ny WhatsApp Status, rehefa eo am-pitsapana izao, dia mety hisy fiovana fohy farany, fa bebe kokoa na kely aza dia tonga kinova amin'ny Snapchat na Instagram Stories.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Toy izao no fiasan'ny WhatsApp Status
Ho an'ny fanamboarana ny iPhone 8 Apple dia afaka nampiasa vy fa tsy aluminium